QORYOOLEY, Soomaaliya - Dagaalyahano aad u u hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa duulaan qorsheysan ku qaadey Fariisin ay ciidamadda dowladda ku leeyihiin gudaha degmada Qoryoolay ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dadka degaanka ayaa u sheegay Warsidaha Garowe Online in dagaalyahanada Al-Shabaab ay gudaha u galeen magaaladda, islamarkaana uu ka dhacay dagaal toos ah oo leysku adeegsaday hubka culus iyo kan fudud.
Wararka ayaa sheegay in ciidamadda dowladda ay iska caabiyeen xoogaga Al-Shabaab, islamarkaana dib u riixaan, iyagoo kaashanaya Ciidamada AMISOM.
Dagaalka oo socda mudo saacado ah ayaa uu labada dhinac ku dhexmaray gudaha iyo dibadda magaalada, sida ay sheegeen dadka degaanka, waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh.
Sarkaal ka tirsan Milatariga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dagaalka lagu dilay ugu yaraan hal dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsanaa iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen Askar dowladda kamid ah.
Al-Shabaab wali dhankeeda war war kamid ah aysan soo saarin dagaalkaan, balse, wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo maalmihii u dambeeyay ay Ciidamada dowladda iyo AMISOM ay ka wadeen degaano badan oo gobolka ka tirsan dhaqdhaqaaq ciidan.
Degmada Qoryoolay oo kamid ah meelaha ugu muhiimsan gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaana 120-KM dhanka waqooyiga galbeed uga beegan Muqdisho, ayaa waxaa ay wehel u noqotay bilooyinkii u dambeeyay weerarada Al-Shabaab.
Si aad u soo dagsato appllication cusub ee Garowe Online Halkaan Riix: [Application]
Weerarka ayaa yimid kadib markii Al Shabaab isku dayday inay xoog ku gasho magaalada...
Soomaliya 28.06.2018. 14:04
Abaabul dagaal oo ka socda gobolka Shabeellaha Hoose
Soomaliya 25.07.2018. 11:09
Sarkaal xil muhiim ah u hayey Al-Shabaab oo la qabtay [Fahfaahin]
Soomaliya 10.07.2018. 11:37